उम्मेदवारमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण : के गर्दैछन् गृह मन्त्रालय ? – Saurahaonline.com
उम्मेदवारमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण : के गर्दैछन् गृह मन्त्रालय ?
सौराहा अनलाइन | २०७४, २९ कार्तिक बुधबार
उम्मेदवारमाथि आक्रमण बढ्दै, गृहसँग छैन कुनै योजना
– चुनाव नजिकिँदै गर्दा देशभरि उम्मेदवारमाथि आक्रमणका घटना बढेका छन् । तर, यसरी आक्रमण बढिरहँदा गृह मन्त्रालयले भने कुनै तयारी थालेको छैन । गृहका अधिकारी तथा सुरक्षा प्रमुखहरू क्षेत्रीय गोष्ठीमा व्यस्त छन् । गृहले चुनावविरोधी विरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए पनि आक्रमणकारीहरू सजिलै भाग्ने गरेका छन् ।
– गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा भने दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको बताउँछन् । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेकपालाई राजनीतिक व्यवहार गर्दा समस्या बढेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्रीले सम्हालेकाले उनले सुरक्षा रणनीतिबारे धेरै छलफल गर्न पाएका छैनन् ।,आजको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
सुरक्षा चुनौती बढ्यो स् प्रमुख आयुक्त
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवले उम्मेदवार र मतदातामा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् । काभ्रेको धुलिखेलमा मंगलबार प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दृष्टिविहीन नागरिकसँगको अन्तरक्रियामा सुरक्षा निकायको मात्रै भर नपरी मतदाता आफैँ पनि सुरक्षित र सचेत रहन यादवले आग्रह गरे।
घटना १ : प्रभाकरको गाडीमा बम प्रहार
२४ कात्तिकमा माओवादी नेता तथा पश्चिम रुकुमका प्रतिनिधि सदस्यका उम्मेदवार जनार्दन शर्मा प्रभाकर चढेको गाडीमा अज्ञात व्यक्तिले बम प्रहार गरे । चौरजहारी नगरपालिका–८ गोइरीमा उनको गाडीमा दुईवटा बम हानिएको थियो । एउटा बम पड्किए पनि गाडीमा भने क्षति भएन ।
घटना २ : अनन्तलाई लक्षित गरी एम्बुस
२५ कात्तिकमा माओवादी नेता तथा रोल्पाका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार वर्षमान पुन अनन्तको टोलीलाई लक्षित गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले एम्बुस विस्फोट गराए । घर्तीगाउँ र ओटको बीचमा पर्ने भिटाबाङमा एम्बुस विस्फोटबाट दुईवटा गाडीमा सामान्य क्षति भएको छ । पुनसहित गाडीमा माओवादीकी समानुपातिक उम्मेदवार जयपुरी घर्ती थिइन् भने अर्को गाडीमा एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल घर्ती र एमालेका प्रदेश उम्मेदवार थिए ।
घटना ३ : अनन्तमाथि फेरि आक्रमण
२६ कात्तिकमा रोल्पाको बाघमारातर्फ जाने क्रममा माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तमाथि पुनः आक्रमण भयो । सो टोली हिँडेको सडकमा माथि भीरबाट ढुंगा लडाएर फायरिङ गरिएको थियो । सुरक्षाकर्मीले जवाफी फायरिङ गर्दा झडप भए पनि गम्भीर घाइते कोही भएनन् ।
घटना ४ : कांग्रेस उम्मेदवार निशानामा
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका १ अर्जममा मंगलबार कांग्रेसको प्रचार टोलीलाई लक्षित गरी विद्युतीय धराप विस्फोट गराइएको छ । अर्जम क्षेत्रमा घरदैलोमा जान लागेका कांग्रेस प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार खम्बिर गर्बुजाको टोलीलाई लक्ष्य गरी विस्फोट गराइएको हो ।
घटना ५ स: पूर्वमन्त्री राई बम आक्रमणमा
मंगलबार भोजपुर ९ख० प्रदेश सभाका एमाले उम्मेदवार तथा पूर्वमन्त्री शेरधन राईलाई लक्षित गरी बम आक्रमण भएको छ । चुनावी सभामा जाने क्रममा आक्रमण भएको हो । राईका सुरक्षागार्ड असइ डिल्ली देवकोटाको बायाँ हातमा गम्भीर चोट लागेको छ । राई सकुशल छन् ।
घटना ६ : निशानामा एमाले उम्मेदवार
मंगलबार नै एमालेबाट संखुवासभामा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार राजेन्द्र गौतम चढेको गाडीलाई लक्षित गरी धुपुको डकेदेउरालीमा विद्युतीय धराप विस्फोट गरियो । गाडीमा क्षति नपुगेको र उम्मेदवार गौतम सकुशल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले जनाएको छ ।
ओलीविरुद्ध नेपाल-खनाल पक्षको सर्वोच्चमा रिट दर्ता, आइतबार सुनुवाई हुने २०७८, ९ बैशाख बिहीबार
पछिल्लो २४ घण्टामा थप २४२८ जनामा कोरोना संक्रमण पुस्टि, ५ को मृत्‍यु २०७८, ९ बैशाख बिहीबार